श्रम मन्त्रीले केही गरेन नभन्नुहोस्, स्वदेश फर्काउनको लागि गृहकार्य गर्दैछौं : श्रम मन्त्री यादव | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
श्रम मन्त्रीले केही गरेन नभन्नुहोस्, स्वदेश फर्काउनको लागि गृहकार्य गर्दैछौं : श्रम मन्त्री यादव
बैशाख २३, २०७७ मंगलबार १२:१६:५८ | सन्जिता देवकोटा
नेपाली श्रमिकका मुख्य श्रम गन्तव्य देशमा कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिम बढेसँगै त्यहाँ रहेका नेपालीमा पनि डर र त्रास बढेको छ । समस्याहरु थपिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकिंदा घर आउन झोला पोको पारेर ठिक्क परेकाहरु समेत उतै रोकिएको महिना दिनभन्दा धेरै भैसकेको छ । त्यसैले पनि परदेशमा रहेका धेरैको मनमा सरकारले कहिले स्वदेश फर्कने बाटो खोलिदेला भन्ने खुल्दुली छ । परदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई स्वदेश फर्काउन सरकारको तयारी चाहिँ के छ त ? यिनै विषयमा सन्जिता देवकोटाले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवसित कुराकानी गर्नुभएको छ ।
तपाईंले केही पहिले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुलाई नआत्तिनुहोस्, लकडाउन खुकुलो भएपछि उनीहरुको घरफिर्तीको लागि प्रक्रिया थाल्छौं भन्नुभएको थियो ? अहिले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका धेरै श्रमिकले हामी कहिले आउन पाउँछौं भनेर सोधिरहेका छन् । उनीहरुको स्वदेश फिर्तीका लागि सरकारको तयारी के छ ?
अहिलेको परिस्थितिमा नेपालमा मात्र लकडाउन छैन, विश्वभरी नै छ । दुनियाँमै लकडाउन भएको बेला नेपालमा खोलेर मात्र हुँदैन । नेपालीलाई कहाँ कस्तो समस्या परेको छ, त्यसको पहिचान हामी गर्दैंछौं र विभिन्न कुटनीतिक प्रतिनिधिसँग कुराकानी पनि गरिरहेका छौं । कसको अवस्था के छ भनेर हामी सम्पर्कमै छौं ।
र उनीहरुलाई कहिलेसम्म बोलाउने भनेर देशभित्र र बाहिर पनि जस्तै कुवेतको सरकार, यूएईको सरकारसँग पनि कुरा भइरहेको छ । व्यवस्थापकीय पक्षको लागि पनि छलफल भइरहेको छ ।
व्यवस्थापकिय पक्षको लागि पनि हामीले सोच बनाइरहेका छौं । उताबाट ल्याउनेबित्तिकै घर पठाउनु भएन । क्वरेण्टीनमा राख्नुपर्यो । अब हाम्रै नेपालभित्र पनि सङ्क्रमणको अवस्था बढ्दैछ ।
यस्तो अवस्थमा बाहिरबाट ल्याउँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्रै ल्याउनुपर्यो । यस्तो अवस्थामा त्यहाँ पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र यहाँ पनि क्वेरण्टीनमा राखेर ठीक भएपछि मात्र समुदायमा पठाउने हो । त्यसको पनि व्यवस्थापनको लागि हामीले उच्चस्तरीय समितिदेखि सरकार सबै निकायसँग छलफल गरिरहेका छौं र पूर्ण तयारी भएपछि हामी ल्याइहाल्छौं ।
म्रो प्राथमिकता भनेको नेपाली नै हो । तर नेपालको समस्या उनीहरुको पनि समस्या हो । उनीहरुको समस्या हाम्रो पनि समस्या हो ।
हामीले यहीबेला ल्याउने भनेर मिति नै तोकेका छैनौं । गन्तव्य देशबाट रोजगारदाताले बिदा दिएको छ र हाम्रा श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुको जहाज व्यवस्थापन भएको छैन ।
त्यहाँ रहेका कुटनीतिक प्रतिनिधिहरुले पनि व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा ल्याउने मिति तय नभएको हो, तर सोच भइरहेको छ । छलफल भइरहेको छ । कुनै नेपालीलाई कुनै पनि किसिमले दुःख अप्ठ्यारो पर्न दिंदैनौ ।
तपाईंले कुटनीतिक पहल गरिरहेका छौं भनिरहँदा अहिले कतिपय नेपाली श्रमिकहरुलाई खान,बस्नकै समस्या भइरहेको छ । अनि कति जना बिरामी पनि छौं हामीलाई मात्र उद्धार गरे पनि हुन्थ्यो भनिरहेका छन् । यस्तै कुवेतमा पनि आममाफीमा सहभागी भएर नेपाल फर्किने दिन कुरेर बसिरहेका छन् । उनीहरुलाई फर्काउनेबारे सरकारले के सोचिरहेको छ ?
हाम्रो जानकारीमा छ । पहिलो कुरा त त्यहाँ रहेका समस्याको बारेमा अरुसँग सम्पर्क हुन सकेन भने त्यहाँ रहेका कुटनीतिक प्रतिनिधिलाई सिधा सम्पर्क गर्ने । त्यहाँ भएन भने काठमाण्डौमा रहेको कल सेन्टर ११४१ नम्बरमा आफ्ना समस्याहरु रेकर्ड गराउने ।
र हामी आफै पनि यहाँबाट पहल गरिरहेका हुन्छौं । त्यसैले कल सेन्टरको सम्पूर्ण रेकर्डहरु हामी आफैंले पनि हेरिरहेका हुन्छौं । त्यसलाई हामी फलो गर्छौं । त्यसपछि स्थानीय कुटनीति लगायत हामीलाई पनि जानकारी भएपछि के गर्नुपर्छ हामी गरिहाल्छौं ।
हाम्रो प्राथमिकता भनेको नेपाली नै हो । तर नेपालको समस्या उनीहरुको पनि समस्या हो । उनीहरुको समस्या हाम्रो पनि समस्या हो । अब दुईटै समस्याको बीचमा तारतम्य नमिलाएर त्यसै हचुवाको भरमा केही गर्नु उचित हुँदैन । त्यसैले उहाँहरुलाई पनि उचित व्यवस्थापन गर्नु हाम्रो धर्म हो ।
जो बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँहरुको सबै व्यवस्थापन गर्न हामी लागिरहेका छौं । आन्तरिक छलफल पनि त्यसैमा केन्द्रित गरेका छौं । व्यवस्थापकीय समयको हामी चाँजोपाँजो मिलाइरहेका छौं ।
पछिल्लोपटक कुवेत सरकारसँग हाम्रो कुरा भइरहेको छ । कुवेत सरकारको सदाशयताबाट अरु देशहरुका सबैलाई पठाइसके । तर नेपाली श्रमिकलाई प्राथमिकता दिएर राखिरहनुभएको छ । हामीहरु त्यो समयसन्दर्भ मिलाइसकेपछि उच्च प्राथमिकतामा राखेर हामी फर्काउँछौं ।
फर्काउने विषयमा तपाईंले तयारी गरिरहेका छौं भनेर भन्दै गर्दा कतिपय नेपालीको प्रश्न यस्तो पनि छ कि, हामी फर्किंदा टिकटको खर्च कसले गर्छ ? हामी आउनेबित्तिकै घर जान पाउँदैनौं होला भन्ने छ । खर्चको, बस्नको खानकोदेखि घरसम्म पुर्याउने व्यवस्था सरकारले गर्छ कि श्रमिक आफैंले खर्च व्यर्होर्नुपर्छ ?
यहाँबाट हामी दुई किसिमको व्यवस्थापन गर्छौं । यति कुरामा नेपालीहरु त्यस्तो गैरजिम्मेवार हँुदैनन् । नेपालको अवस्थादेखि सबै परिचित नै छन् । त्यसैले सक्ने जति हामी गर्नेछौं । सेल्फ क्वरेण्टीनमा बस्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यसमा सबैले मिलिजुली गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकाले सबैको व्यवस्थापन गर्ने वातावरण बनाउन सक्दैन ।
अनि मन्त्रीज्यू, आईओएमको तथ्याँकअनुसार झण्डै २५ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा छन् । सरकारकै तथ्याँक हेर्ने हो भने ५० लाखभन्दा माथि छ । सरकारको प्राथमिकता कस्ता नेपाली छन् ? कि स्वदेश फर्कन खाेज्ने सबैलाई फर्काउने हाे ?
सबै होमवर्क भइरहेको छ । त्यसमा तपाईंले भनेको डाटामा भारतमा बसेका नेपाली पनि हुन् । भारतमा बसेका नेपालीहरुलाई जहाज पठाइरहनु पर्दैन । त्यहाँ लकडाउन खुलेपछि बिस्तारै त्यहाँबाट व्यवस्थापन रेलबाट, बसबाट भइहाल्छ । बाहिरबाट जहाजमा ल्याउनुपर्नेहरुमा उडान चल्न थालेपछि हामीले ल्याउने हो ।
लकडाउन नखुलेको अवस्थामा पनि चार्टड गरेर ल्याउनुपर्ने परिस्थिति पनि पर्न सक्छ । त्यसको तयारी हामी गरिरहेका छौं । मलाई लाग्छ सबैभन्दा पहिले कुवेतबाट साथीहरु ल्याउने अवस्था पनि आउन सक्छ ।
विदेशबाट फर्कनेलाई देशभित्रै रोजगारी सिर्जनाका लागि चाहिँ अहिले कस्तो गृहकार्य भइरहेको छ ?
नेपाल र नेपालीको लागि यो एउटा ठूलो अवसर हो । जो वैदैशिक रोजगारीमा सीप सिकेका छन्, उहाँहरुलाई म के भन्न चाहन्छु भने विदेशमा सिकेको सीप नेपालमै प्रयोग गर्नुस् ।
तपाईंहरु विदेशमा आफ्ना पाखुरा चलाएर जुन श्रम गर्नुभयो, बाहिरको लागि जुन काम गर्नुभयो, अब आफ्नै गाउँठाउँको लागि काम गर्नुस्, अब आफ्नै देशको प्रगतिको लागि श्रम गर्नुहोस् । ती सबै श्रमिकहरुको अनुभव र सीपको सदुपयोग गर्नमा हामी कार्ययोजना बनाइरहेका छौं ।
हामी अहोरात्र खटेर सिँगै सरकार त्यसैमा चिन्तित छ । त्यसैले हामी नै चिन्तित भइसकेपछि उहाँहरुले पनि चिन्ता लिन थाल्नुभयो भने थप हुन्छ । उहाँहरुले कुनै चिन्ता लिनुपर्दैन । हामी सबै चिन्ता लिइरहेका छौं ।
सहजताको लागि हामीहरु नीति र कार्यक्रम जुन सरकारको आउँदैछ, त्यहाँदेखि सम्बोधन सुरु गर्ने र व्यवहारिक रुपमा कार्यनीतिमा कसरी परिणत गर्ने भन्ने गृहकार्य भैरहेको छ । त्यसको लागि कृषि क्षेत्रमा कति लगाउने, निर्माण क्षेत्रमा कति लगाउने, त्यसको लागि एउटा लेबर बैंकको हामी व्यवस्थापन गर्दैछौं । लेबर
बैंकमा सबैको डाटा रेकर्ड भइसकेपछि हामी त्यसको वर्गीकरण गर्छौं र उनीहरुको दक्षताको आधारमा व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाइरहेका छौं ।
त्यसोभए कोरोनाको यो महामारीपछि विदेशबाट फर्किने श्रमिकहरुको लागि सरकारले यो वर्षदेखि रोजगारी नयाँ योजना ल्याउँदैछ ?
हामी नयाँ नयाँ कार्यक्रम बनाउँदैछौं । नेपालीहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्छौं ।
तपाईँले यतिधेरै काम गरिहेको छु भन्नुभयो, तर धेरैले त श्रम मन्त्रीले केही गर्नुभएन भन्छन् नि त ?
अहिलेसम्म तपाईंसँग जे जति कुरा गर्यौं, त्यो सबै श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुकै लागि हो । यो निजी कुरा होइन सरकारी कुरा हो । सरकारले बनाइरहेको योजनाहरु सबै उहाँहरुको हितको लागि हो । श्रम मन्त्री भनेको छुट्टै व्यक्ति हुँदैन । यो सरकारकै एउटा अंग हो । नेपाल सरकारको हैसियतले नेपाल सरकारको जिम्मेवारीमा श्रम मन्त्रालय पनि एउटा युनिट हो ।
यो जति पनि योजनाहरु बनिरहेको छ, त्यो हामीहरुको पनि योगदान भएकाले श्रम मन्त्रीले केही पनि गरिरहेको छैन नभन्नुहोस् । अहिले जे जति भइरहेको छ त्यो श्रम मन्त्रालयमार्फत नै हुन्छ ।
त्यसो भएदेखि मन्त्रीज्यू अब श्रमिकहरु विदेशमा अन्यौलमा हुनुहुन्छ, डराइरहनुभएको छ त्यसका लागि हाम्रो सरकार छ भनेर ढुक्क भएर बस्दा हुन्छ ?
ढुक्क भएर बस्दा हुन्छ । हामीहरु उनीहरुकै व्यवस्थापनमा लागिरहेका छौं । हामी अहोरात्र खटेर सरकार नै त्यसैमा चिन्तित छ । त्यसैले हामी नै चिन्तित भइसकेपछि उहाँहरुले पनि चिन्ता लिन थाल्नुभयो भने थप हुन्छ । उहाँहरुले कुनै चिन्ता लिनुपर्दैन । हामी सबै चिन्ता लिइरहेका छौं ।
गन्तव्य देशमा रहनुभएका नेपाली श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु अप्ठ्यारोमा परिरहनुभएको छ, उहाँहरुले त्यो देशको निर्देशन पालना गर्ने, आइसोलेशनमा बस्ने, आफूलाई सङ्क्रमित हुनबाट जोगाउने हो ।
कुनै समस्या भयो भने हाम्रो कुटनीतिक निकायमा सम्पर्क गर्ने । त्यहाँ पनि भएन भने आफ्ना सम्पूर्ण समस्याहरु हाम्रो कल सेन्टरमा रेकर्ड गराउने, हामी त्यसको व्यवस्थापन गर्छौं । फेरि चिन्ता लिएर होइन उच्च मनोबल र साहसका साथ सबै नेपालीहरु बाहिर बस्नुस्, हामी व्यवस्थापनमा लागेका छौं भनेर म विश्वास दिलाउन चाहान्छु ।
(उहाँसँगकाे याे कुराकानी कार्यक्रम देश परदेशमा सुन्न सकिन्छ ।)
मे ५ : खाडी र मलेसियामा काेराेनाकाे पछिल्लाे अपडेट
हेलो नेपाल ...खै के हो के हो ..नआतिनुस भन्दा भन्दै एक डेढ महिना भैसक्यो ....भएको पैसा सकिसक्यो ....सबै सक्यो ...के गर्ने ????
देब बहादुर सारू मगर
May 5, 2020, 12:29 p.m.
मेरो देशको सरकार के हेरेर बसेको छ खाली उद्दार गरछौ भनेको मात्र छ किन यस्तो खाडि लगायत विभिन्न देशमा अलपत्र परेका नेपाली खाना बस्नको ठेगान अनि जेल जिबन बितायकाछन ।यो सरकार के चाहन्छ महामारीको सिकार अथवा सिकार पछिको उद्दार बताइदिन परो ।